နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: April 2008
တိတ်တဆိတ် နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို
သူတို့တစ်တွေရဲ့ မနာလိုခြင်း ဥခွံထဲ ထည့်ဖို့ ကြံနေလေရဲ့...။
အဆင်မပြေမှုတွေကို ကိုယ့်အိတ်ပေါက်ထဲ ထည့်မယ်တဲ့လား...။
ဒါဝင်တောင် လက်လျှော့သွားတာ ကြာရော့...။
လံထော်ထော် ထူအမ်းအမ်း နှုတ်ခမ်းအစုံတွေကို ကိုယ်မြင်နေရရဲ့...။
ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဖုံးလွမ်းနေတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ပြီးတော့
ကိုယ့်ကို လိမ်ညာမှု သွေးစက်တွေနဲ့ ပေကျံနေတဲ့ လျှာအပြားလိုက်နဲ့
အရောင်အဆင်းမဲ့ စကားလုံးတွေကို ပလုံးပထွေး အန်ချပြနေလေရဲ့...။
သူတို့တစ်တွေရဲ့ လက်ဖမိုးကမှ အမှန်
ကိုယ်တွေ မြင်နေတဲ့ လက်ဖ၀ါးက စာမတင်ထိုက်ဘူး ဆိုပြီး
သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဈေးကွက်ခင်းနေလေရဲ့...။
မာယာတွေ မသုံးတတ်ရင် ကိုယ့်ဆီ လာသင်ကြားလှည့်...။
အစွယ်တွေ လက်သည်းတွေ ၀ှက်ထားခဲ့တာကြာရော့...။
တောဘုရင်ကို အန်တု ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ...။
သားရဲတွင်းထဲ ခုန်ချသင့်ရင် ခုန်ချရမှာပဲ...။
ပိုင်ရှင်မဲ့ ဓါးအိမ်ထဲက အသွားတွေ တုံးမတတ်
ခုတ်ထစ်နေခဲ့ရတဲ့ ဓါးတစ်ချောင်းသာ ဖြစ်ခဲ့တယ်...။
(မိုးညို့ရင် လေးတွေ ညို့မယ်လို့ ပြောဖူးတဲ့ ခါတော်မီသားရေ... ငါလာပြီ....။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:23 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကျိုင်းတုံဒေသထွက် အစားအစာမျာ3း: နမ်းဖစ်ခို (ခမေ့်ဖိတ့်ခူဝ်;)
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အိမ်လွမ်းသူများ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်က သယ်ရင်းများကို နှိပ်စက်ဖို့ အလှည့်ကျတဲ့ ကျိုင်းတုံဒေသထွက် အစားအသောက်ကတော့ “နမ့်ဖစ်ခို” ရှမ်းလိုဆို “ခမေ့်ဖိတ့်ခူဝ်;”လို့ အမည်ရတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ အစားအစာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်...။
၀က်ခေါက်အထွက်များ၊ အစားများတဲ့ ဒေသဖြစ်လို့ ၀က်ခေါက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေါများနေတာ အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး...။ ၀က်ခေါက်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အရင်ပို့စ်တွေမှာ ၀က်ခေါက် ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ တွေမှာ ရှင်းပြဖူးပါပြီ...။ အခု ဒီနမ့်ဖစ်ခိုမှာ ပါတဲ့ ၀က်ခေါက်အမျိုးအစားကတော့ သုံးထပ်သား (သစ်သား သုံးထပ်သားကို ပြောတာ မဟုတ်ကြောင်း သတိချပ်ပါလေ...။) ကို ကြော်ထားတဲ့ “င်္ခပ်;မူင်္ဂမ်း” အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်...။
အမေလုပ်တာ လွယ်လွယ်လေးရယ်...။ ပထမ ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံပါရုံလေး သင်ပြီး မညက်တစ်ညက် ထောင်းရတယ်...။ နောက် ၀က်ခေါက်ကို အနေတော် အရွယ်လေးရအောင် ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ထားလိုက်...။ လက်တစ်ဆစ်လောက် အရွယ်ဆို ရပါပြီ...။ သင်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ပြူတွေကို မတူးအောင် ကြော်ပါ...။ ငြုပ်သီးမှုန့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့် တို့ကို အနေတော် ထည့်ပါ...။ ပြီးရင်တော့ မီးဖိုပေါ်က ဒယ်အိုးကိုချ (ဂက်စ်မီးနဲ့ ချက်ရင်တော့ ဂက်စ်မီးကို ငြိမ်းလိုက်ပေါ့...။ ) ညှပ်ထားတဲ့ ၀က်ခေါက်ကို ဒယ်ထဲ ထည့်ပြီး ခုနင်က ကြော်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကြော်တွေနဲ့ ရောပြီး ဂလောက်ဂလောက်နဲ့ မွေလိုက်ပေါ့...။
ရပါပြီဗျား ... ရိုးရာ ဟင်းလေးတစ်ခွက်...။
အဲဒီဟင်းနဲ့ တွဲဖက်စားဖို့ အရည်သောက်လေး တစ်ပွဲက ပါတတ်ပါတယ်...။ အဲဒီ အရည်သောက်ဟင်းလေးကိုတော့ နောက်မှပဲ တင်တော့မယ်...။ ဒီနေ့ နည်းနည်း ပင်ပန်းလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်ပါရစေ...။
အိမ်လွမ်းသူများ နမ့်ဖစ်ခို ၀က်ခေါက်ဟင်းကို ကြိုက်သလောက် အိမ်သယ်သွားနိုင်ပါကြောင်း စေတနာ ဗလပွနဲ့ အလှူကြီး လုပ်လိုက်ပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:36 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: local food, ကျိုင်းတုံ, အစားအစာ
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:09 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
တ'းရှဝ်းရှဂ့့််ခိူဝ်း = ကျွန်ုပ်တို့ ရှမ်းလူမျိုးများသည် မိမိအမျိုးအနွယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြသည်။
(We, Shan, love our National.)
ရှဝ်းရှဂ့့််ခိူဝ်းတ'း = ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှမ်းမျိုးနွယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြသည်။
(We love Shan National.)
ရှဂ့်ခိူဝ်းတ'းရှဝ်း = ကျွန်ုပ်တို့ ရှမ်းမျိုးနွယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြပါ။
(Love our Shan National.)
ခိူဝ်းတ'းရှဝ်းရှဂ့် = ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်မြတ်နိုးသော ရှမ်းမျိုးနွယ်။
(Shan National which we love.)
ဘာသာပြန်ခြင်း အတတ်ပညာ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အမှားအယွင်းရှိခဲ့ပါလျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:08 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:52 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:58 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
တစ်ရံရောဆီ အခါက မိုးတို့သည် ကောင်းကင်ပေါ်မှ ခုန်ပေါက်ကျဆင်းဖူးသည်...။ (အခုတော့ မြေကြီးပေါ်ကနေ မိုးပေါ် ထိုးတက်နေလို့လား ဟု ရွဲ့မမေးကြရန်...)
မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရင်း မျက်နှာပေါ်သို့ တစ်ပေါက်ချင်းစီ ကျခဲ့ဖူးသော မိုးစက်ငယ်ကလေးများကို ငတ်မွတ်ဖူး၏။ (မင်းကွာ အိမ်မှယလဲ ရေသန့်တွေ သောက်လို့ ရရဲ့သားနဲ့ ဟုမရွဲ့ပါနှင့်...။ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ်ပါ...။)
မိုးရေစက်များ စုပေါင်း၍ မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းလာသော မြေပြင်ပေါ်မှ ရေစီးကြောင်းကလေးများ တစ်ဖြည်းဖြည်း အိုင်ထွန်းလာသည်ကို ငေးကြည့်ဖူး၏။ (အရသာရှိတယ်မောင်....။ )
စုစည်းမိသော ရေပမာဏများ တိုးတက်များပြားလာသောအခါ မူရင်းနေရာမှ ပိုမို၍ နိမ့်လျောသော နေရာသို့ ရွေ့မျောကြပြန်လေသည်...။ ထိုအခါ တစ်အီအီ လိမ့်ဆင်းနေသော ရေစီးကြောင်းတစ်ခု စတင် ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်....။
ထိုရေစီးကြောင်းပေါ်သို့ ကောင်းကင်ထဲမှ မိုးစက်မိုးပေါက်များ ခုန်ဆင်းထိမှန်ရာမှ ရေပူစီဖေါင်းလေးများ ဖြစ်ပေါ်လာလေရာ ရေပလုံစီလေးများသည် ရေစီးကြောင်းအတိုင်း လိုက်လံမျောပါကြကုန်လေ၏။
အဆိုပါ ရေပလုံစီ ပူဖေါင်းလေးများ၏ သက်တမ်းကို တွက်ဆမိပါသလော....။
အဆိုပါ ရေပလုံစီ ပူဖေါင်းလေးများသည် ရေစီးကြောင်းတစ်လျှောက် အဘယ်မျှလောက် ခရီးနှင်နိုင်ပါမည်နည်း...။
အချို့သော ပူဖေါင်းကလေးများသည် စတင်ဖြစ်ပေါ်ချင်း ခဏ၌ပင် အပေါ်မှ ခုန်ဆင်းလာသော အခြားသော မိုးစက်မိုးပေါက်မှ လွင့်စင်ထိမှန်မှုကြောင့် ဇီဝိန်ချုပ်ရရှာ၏။ ပူဖေါင်းသက်တမ်းစေ့အောင်ပင် မနေရရှာပေ...။
အချို့သော ပူဖေါင်းများသည် ခရီးအကွာအဝေးတစ်ခုအထိ ရောက်ခါမှ မိုးစိက်ထိမှန်မှုကြောင့် ဖေါက်ကနဲ ကြွေလွင့်ရရှာ၏။
အချို့သော ပူဖေါင်းများသည် အရှေ့အနောက် တန်းစီ မျောပါသွားရင်း တစ်နေရာတွင် ရေစီးတန့်နေပါက အတူတူ ပူးပေါင်းမိကာ ပူဖေါင်း စုံတွဲလေးများ ဖြစ်သွားလေ့ရှိ၏။
အဆိုပါ ပူဖေါင်းစုံတွဲများအနက်မှ အချို့သော ပူဖေါင်း စုံတွဲများသည် ဆက်လက်၍ ခရီးနှင်ကုန်၏။
အချို့သော ပူဖေါင်းစုံတွဲများသည်ကား ပေါင်းမိမိခြင်း တစ်ခဏတွင်ပင် ပေါက်ကွဲလေ၏။ အချို့သော ပူဖေါင်း စုံတွဲများသည် ခရီးအကွာအဝေး တစ်ခု အထိ အတူတူ ခရီးနှင်ခဲ့ပြီးခါမှ ပေါက်ကွဲသွားတတ်၏...။
အချို့သော ပူဖေါင်းစုံတွဲများသည်ကား ပြန်လည် ကွဲကွာသွားကြကာ တစ်သီးတစ်ခြားစီ ခရီးနှင်ကြလေ၏...။
တစ်ချို့သော သက်ပြင်း ပူဖေါင်းများသည် မိုးစက်မိုးပေါက်များ ထိမှန်သည်ကို ဟန်မပျက် ဆက်လက်ချီတက်နေသကဲ့သို့ တစ်ချို့တစ်ကိုယ်တော် ပူဖေါင်းများသည် မိုးစက်ထိမှန်ပြီးခါမှ ပူဖေါင်းသေးသေးလေးများပင် စီးပွားလာချေသမုံ့...။ အာဂ ပူဖေါင်းပါတကား...။
အလို...။ တစ်ချိန်သော တစ်ခါတွင် ရေစီးကြောင်းသည် အမှိုက်၊ အတားအဆီး တစ်ခုခုနှင့် ကြုံတွေလေသော အခါ တန့်နေတတ်၏။
ထိုအချိန်အထိ မကြေပျက်သေးပဲ ခရီးနှင်လာသော တစ်ကိုယ်တော် သက်ပြင်း ပူဖေါင်းများ၊ ပူဖေါင်းစုံတွဲများ၊ မူလပူဖေါင်းနှင့် ယင်းမှ စီးပွားလာသော ပူဖေါင်းများ တို့သည် အတားအဆီးများနှင့် ငြိမိကာ ကျန်ခဲ့သည်က ကျန်၍ ဆက်လက်မျောပါသည်က ရှိသကဲ့သို့ အတူတစ်ကွ မျောပါမြဲ မျောပါနေသည့် ပူဖေါင်းများလဲ ရှိလေသည်...။
အတားအဆီး အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့မချင်း ဆက်လက် မျောပါကုန်လေ၏။
စီးဆင်းကုန်လေ၏။ သက်တမ်းမကုန်မချင်း ရေစီးကြောင်းအလိုက် စီးမျောကုန်လေ၏။
အဘယ်အချိန်အထိ သူတို့ ဆက်လက် ခရီးနှင်နိုင်ပါမည်နည်း....။
မိမိရော...။ ဘ၀ရေစီးကြောင်းအတွင်း အဘယ်အချိန်အတိုင်းအတာအထိ တစ်ကိုယ်တော် မျောလွင့်နိုင်ပါမလဲ...။
(ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ မိုးရွာစဉ် အိမ်ရှေ့၌ တွေ့မြင်နေခဲ့ရသော မိုးရာသီ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ပြန်လည် ခံစား တင်ပြပါသည်....။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:40 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Bubbles, circle, Rain
Juzamemoire of 3333th visitor here. Actually it was me, myself visiting my own blog. :D
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:48 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ခရီးထွက်နေရလို့ ဘလော့ဂ်ကြွေးတွေ တင်တာများနေပြီ ထင်တာပဲ...။ ဘလော့ဂ်ကြွလာ မိတ်သဟာများ နေကောင်းကြပါရဲ့နော်...။ လာလာကြည့်ပြီး ပို့စ်အဟောင်းပဲ ဖတ်ဖတ် ပြန်သွားရတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အားတုံ့အားနာ ဖြစ်မိပါရဲ့...။ အဲဒီအတွက် တင်နေတဲ့ အကြွေးများကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဆပ်သွားပါမယ့်အကြောင်း ကြိုပြောလိုက်ပါမယ်...။ (အချိန် လစ်မစ် ထည့်မရေးထားတာ တွေ့တယ်နော်...။ ဟဲဟဲ...။)
ပုံလေးတွေ အဆင်သင့် ရှိနေတော့ စားသောက်ဖွယ်ရာနဲ့ ဆိုင်ရာများကို တင်လိုက်ပါတယ်...။ ကျိုင်းတုံဒေသထွက် ရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာနဲ့ အထင်ကရ အစားအသောက်များ ဖြစ်ပါတယ်...။ အောက်ကပုံတွေမှာ ၀င်ရောက် စားသုံးနိုင်ပါတယ်...။
၁။ မဲ့ (ဒေသအခေါ်အဝေါ်)
၀ါးထဲမှာ နေတတ်တဲ့ အကောင်တွေလို့ သိရပါတယ်...။ ခူလိုလို ဘောက်ဖတ်လိုလို အကောင်တွေပေါ့...။ ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလတွေမှာ ဒီအကောင်တွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်...။ သူတို့ကို ဆီပူလေးနဲ့ ကြွတ်နေအောင် ကြော်ပြီး ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ တွဲဖက် သုံးဆောင်ရပါမယ်...။ ယမကာလုလင်များတော့ သူရာရည်လေး တစ်မြမြနဲ့ပေါ့...။
အရသာက ဆိမ့်တိမ့်တိမ့်လေးနဲ့...။ သွေးတိုးတတ်သူများ များများ စားလို့ မသင့်ပါ...။ တစ်ချို့ဆို တစ်ကောင်လေးပဲ မြည်းတာကို သွေးတက်တယ်.. နောက်ကြောတက်တယ်ဆိုပြီး ညည်းကြတယ်...။ တစ်ချိုကျတော့ တစ်ပန်းကန်လုံးကုန်အောင် စားလဲ ဘာမှ မဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်...။ (ကျွန်တော့်လိုပေါ့...)
အခုနေခါမှာ ၅၀၀ ဂရမ် အလေးချိန်ရှိတဲ့ မဲ့ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၀၀၀ လောက် ရှိပြီလို သိရပါတယ်...။ အဲဒီပန်းကန်ထဲက မဲ့ လေးတွေကတော့ ၂၀၀၀ လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တာပဲ...။ စားကောင်းတယ်ဗျုိ့...။
၂။ ကျိုင်းတုံ ၀က်အူချောင်း (အစစ်အမှန်)
အရင်တစ်ခါက ဂိုးဒဲန်းမိုင်း ယိုးဒယားဈေးက ဇင်းမယ် ၀က်အူချောင်းလို နနွင်းမှုန့်နံ့ နံတဲ့ ၀က်အူချောင်း မဟုတ်ပါ...။ ကျိုင်းတုံမြို့ထွက် မြို့မဈေးထဲက မနက်ခင်းမှာသာ ရောင်းတတ်တဲ့ ၀က်အူချောင်း ဖြစ်ပါတယ်...။ မန်းလေး၊ ရန်ကုန်ကလူတွေ သိတဲ့ တရုတ် ၀က်အူချောင်းတွေလို သကြားချို ချိုတာ မဟုတ်တဲ့ အရသာနဲ့ပါ...။
၀က်သားထဲက သုံးထပ်သားလိုမျိုးကို တောက်တောက်စင်းပြီး ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့် စတာတွေနဲ့ သေချာစွာ နယ်ထားပြီး ၀က်အူထဲကို ညဦးပိုင်းကတည်းက သွတ်ပြီး ဈေးသွားခါနီး မနက် ၃-၄ နာရီလောက်မှာ အိမ်ကနေ ဆီနိုင်နိုင်နဲ့ ကြော်လာရောင်းတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ ဒေသထွက် စားစရာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ပုံထဲက အနေတော် အရွယ်အစားလောက်က တစ်ချောင်းကို ၅၀၀-၇၀၀ လောက် အစားစား ရှိပါတယ်...။ နာမည်ကြီး၊ အရသာကောင်းမွန်မှု စတာတွေ အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ပေါ့...။ ရန်ကုန်မှာ မိုဟွမ် ၀က်ခေါက်ကြော်ထုပ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ အမေ “နိုင်းရယ်” လုပ်တဲ့ ၀က်အူချောင်းဆို နာမည်ကြီးပါတယ်...။ “နိုင်ရယ် ဆိုက်လောက်ဖစ်” ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်...။ (ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာပြီး ရှလွတ်...။)
၃။ ခါချဉ်ဥ (ခ',မူတ်းသူမ် / ခ',င်္မင်းမူခေ်း)
တောင်လေပူပူတွေ တိုက်တတ်တဲ့ နွေရာသီမှာ ပေါ်တတ်တဲ့ ရာသီပေါ် စားသောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်...။ ခါချဉ်ကောင်လေးများရဲ့ ဥတွေ ဖြစ်ပါတယ်...။ ခါချဉ်အုံတွေကို တုတ်နဲ့လိုက်ထိုးပြီး ခါချဉ်တွေ ကုန်မှ သူတို့ အသိုက်ကို ဖြုတ်ပြီး ဖက်နဲ့ထုပ် လာရောင်းတတ်ပါတယ်...။
သင်္ကြန်နားနီးလာပြီဆို ကျိုင်းတုံမှာ အရင်က ထုံးစံအတိုင်း ဈေးဟောင်းနေ့ (ကတ်ကောင် = ဂ၊တ်,ဂ၊၀်,)ဆိုပြီး အရင်က ဈေးဟောင်းနေရာမှာ ဈေးဆိုင်တွေ တည်ပြီး ရောင်းချကြပါတယ်...။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ရက်တွေရဲ့ ကတ်လိနေ့မှာ လာရောင်းကြပါတယ်...။ အဲဒီနေ့မှာ ခါချဉ်ဥတွေ ကွာလတီကောင်းတာလေးတွေ ရတတ်ပါတယ်...။ (ဈေးနေ့တွေအကြောင်း သီးခြား ရေးပြပါ့မယ်...။) ခံတက်ချဉ်နဲ့ မွေပြီး စားရပါတယ်...။ အဲဒီနေ့မှာ စားရင် ဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆိုလား မသိ ပြောသံ ကြားဖူးပါတယ်...။ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ မယ်ဇလီဖူးသုပ် စားကြသလိုပေါ့...။)
ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ထုပ်ကို ဟင်းတစ်ခွက်စာလောက် ရှိတဲ့ အထုပ်ကို ၂၀၀၀ လောက် ပေးရပါတယ်...။ ဥတွေ များသလား မမေးနဲ့...။ ပဲကြီးလှော် ပုံစံ ဖြူဖြူဥတွေအပြင် ခါချဉ်ကောင်လောင်း ဖြူဖြူလေးများပါ အဆစ်ပါလိုက်သေး...။ ဥတွေ ကိုက်လိုက်ရင် တစ်ထောက်ထောက်နဲ့ ဆိမ့်နေတာပဲ...။ ဆိမ့်နေတာလေးကို ခံတက်ချဉ်က ၀င်ဝင်ဖြည်ပေးတော့ သွေးမတက်ဖူးပေါ့...။
ကျိုင်းတုံမှာ ဟိုးအရင် စော်ဘွားခေတ်ကဆို ငါးရက်တစ်ဈေး ဆိုပြီး ဈေးနေ့လေးတွေ ရှိပါတယ်...။ ကတ်လိ ၊ ကတ်ထိုက်၊ ကတ်ကောင်၊ ကတ်လုံ၊ ကတ်အွန် (ဂ၊တ်,လီး၊ ဂ၊တ်,ထ'၊;၊ ဂ၊တ်,ဂ၀်,၊ ဂ၊တ်,လူင်၊ ဂ၊တ်,ကွခေ်,)စသဖြင့်ပေါ့...။ ကတ်လိ ဆို ဘယ်ရွာမှာပဲ ဈေးဖွင့်တယ်... ကတ်ထိုက် ဆို ဘယ်ရွာမှာပေါ့လေ...။
အဲ ... ငါးရက်မြောက်ဈေးနေ့ကတော့ ဈေးကြီးနေ့ (ကတ်လုံ) လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကျိုင်းတုံမြို့ပေါ်က ဈေးမှာ ရွာနီးချုပ်စပ်က ဈေးသည်တွေ အားလုံး လာရောက် ရောင်းချကြပါတယ်...။ အဲဒီနေ့မှာ ၀ယ်ခြမ်းချင်တာတွေ စုံစုံလင်လင် ရရှိနိုင်ပါတယ်...။ အခု ဟိုခုံလို့ ခေါ်တဲ့ နေရာ (ကျိုင်းတုံဟော်နန်း ဘေးနားက ကလေးကစားကွင်း လုပ်ထားတဲ့ နေရာ) မှာ ဈေးကြီးနေ့ကို ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားကြပါတယ်...။
ခုထိလဲ ရွာနီးချုပ်စပ်က အဲလိုပဲ ရောင်းဝယ်နေကြတုန်းပါပဲ...။ အရင် ဈေးကြီးနေ့တွေတုန်းက တည်ခင်းရောင်းချနေတဲ့ နေရာလေးကတော့ ခုခေတ်မှာ စည်ပင်က နေရာရွှေ့လိုက်တော့ အခုလက်ရှိ မြို့မဈေးနေရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့...။
ကျိုင်းတုံဟော်နန်းဆိုတာ မသိသူများ အခု အဲဒီဟော်နန်းနေရာမှာ ဟော်နန်းကို ဖျက်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ ကျိုင်းတုံဟိုတယ်ကိုတော့ သိကြမှာပါ...။ (စကားမစပ်။ ။ အဲဒီ ကျိုင်းတုံ ဟော်နန်းက ရှမ်းပြည်တစ်ကြောမှာ အလှဆုံး၊ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှု အရှိဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးလို့ သိရပါတယ်...။ ဓါတ်ပုံကတော့ မလွယ်သေးလို့... အဆင်သင့်ဖြစ်မှ တင်လိုက်ပါမယ်...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:38 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။